နွေ ဦး ရာသီ 2017 ၏သော့ချက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းအတွက်စတိုင်ကျသောပစ္စည်း ၅ ခု
Michael Serrano | | ဖြည့်, ပုံ
ရာသီဥတုကောင်းသောရောက်ရှိခြင်းသည်သင်၏ဆောင်းရာသီအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလက်နက်တိုက်တစ်ခုပြင်ဆင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုလှည့်ပတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသောနွေ ဦး - ဖော်ရွေအရာ အားလပ်ရက်များနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသီးခြားခွဲထားသည့်လများအတွင်း။
အောက်ပါတို့ဖြစ်သည် ဒီနှစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ယခုနှစ်တွင်သုံးသည်, နွေ ဦး ၏ (အံ့ဆဲဆဲ) ရောက်ရှိဆင်နွှဲရန်သင့်အားငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဖိတ်ကြား။
4 တက်ကြွ beanies
နေရောင်ခြည်တိုးပွားများပြားလာသည်နှင့်အမျှမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသောအကာအကွယ်ပါသောမျက်မှန်တပ်ထားခြင်းသည်အိမ်ပြင်တွင်အချိန်များစွာဖြုန်းနေသောသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ 2017 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်များအနည်းဆုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်ကြသည်။ မှန်ဘီလူးကြီးများနှင့်အထူဘောင်များကိုရှာဖွေပါ။ တစ်ခုခုကိုအရောင်များကိုမရှက်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ အထူးသဖြင့်နွေ ဦး ရာသီ၌ရောင်စုံခြေအိတ်များဝတ်ဆင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ရိုးရိုးသို့မဟုတ်ပုံစံ, ငါးပိသို့မဟုတ်တက်ကြွအရိပ်မင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္andာန်ရောပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါ ၀ င်တဲ့ပျော်စရာလေသံကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ရွေးချယ်ပါတယ်။
rest ၀ ရတ်ကျွန်း
လက်ရှိတွင်ကျောပိုးအိတ်များသည်အအေးဆုံးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့်အခမဲ့အချိန်မဟုတ်ပေမယ့်စိတ်အေးလက်အေးစားဆင်ယင်ကုဒ်များနှင့်အတူရုံးများကိုသွားဖို့။ ဒီမော်ဒယ်ကနွေ ဦး ရာသီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူပေးနိုင်တယ်။ သားရေကိုနိုင်လွန်နှင့်ကောင်းသောအနက်ရောင်အပြာရောင်အတွက်ပုံမှန်အနက်ရောင်အရောင်ဖြင့်အစားထိုးသည်.
သိုးမွှေး ဦး ထုပ်ဆောင်းရာသီအတွက်သာဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူသည် Said? နွေ ဦး ရာသီအတွင်းသူတို့အတွက်နေရာရှိသေးသည်။ ယခုနှစ်တွင်ရဲရင့်သောအရောင်များကိုသွားပါ။ ဒီလိမ္မော်ရောင် beanie ကိုစိမ်းပြာရောင်တီရှပ်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်ရှေ့တံခါးမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်အသွေးစုံလင်သောကမ္ဘာသို့ ၀ င်ပါ။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းထက်ပိုအထောက်အကူပြုတယ်။ ယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်ဖက်ရှင်အမြင့်ဆုံးနည်းစနစ်သည် သင့်အကြောင်းတစ်ခုခုပြောပါသို့မဟုတ်သာမာန်အားဖြင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည့်အချို့ကိုရွေးပါ သူတို့ကိုသင်၏အကျီများနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီ၌ထားလေ၏.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းအတွက်စတိုင်ကျသောပစ္စည်း ၅ ခု
ဒီနွေ ဦး ရာသီအတွက်လေးရဲအပိုင်းပိုင်း